लक्ष्मीको डुङ्गा जिन्दगी | eAdarsha.com
लक्ष्मीको डुङ्गा जिन्दगी
पोखरा । फेवाताल र डुङ्गाबीच अटुट सम्बन्ध अचेल टुटेको छ । ५ महिना बितिसक्दा पनि फेवाको पानीमा पूर्णरुपमा डुङ्गा सिँचित हुन पाएको छैन । ताल किनारमै सिक्रीले बाँधिनुपरेको छ ।
ताल र डुङ्गाबीच सम्बन्ध टुटेझैं डुङ्गा र लक्ष्मी नेपालीको पनि सम्बन्धमा पनि दरार छ । डुङ्गा कहिले दायाँ ढल्कियो, कहिले बायाँ । जीवनको घुम्तीमा आएका २ जना श्रीमान् जीवनको बेलगाडा बीचमै छोडेर गए । उनले अर्को धोका खाइन् ।
यसरी सम्बन्धको नाता पर्गेल्न नसक्दा हुत्तिएर फेवातालमा डुङ्गा चलाउन आएकी लक्ष्मीलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले चुल्होसम्म प्रभाव पर्‍यो । ५ महिना बितिसकेको प्रभाव कति दिन अझै पर्छ थाहा छैन । १२० दिनसम्म लकडाउन भयो । अब सहज होला भनियो । तर भएन । कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गए । लकडाउन हटेको महिना दिन नपुग्दै कास्कीमा निषेधाज्ञाको जालो फैलिएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम फैलिन नदिन सरकारले चैत ११ मा लागू गरेको लकडाउन आजभन्दा ठिक १ महिनाअघि साउन ७ मा हटाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले भदौ २ देखि जिल्लामा लगाएको निषेधाज्ञा आइतबार पुनः थपेर भदौ १२ सम्म पुर्‍याएको छ । डुङ्गा कहिले चलाउन पाइएला र रोजीरोटी सहज होला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै बरोबर फेवा किनार बाराहीघाटमा भेटिने लक्ष्मी भारी मन लिएर फर्किन बाध्य छिन् ।
पर्यटकीय सहर पोखराको लेकसाइडमा जन्मीहुर्केकी उनी अहिले ३६ वर्षकी भइन् । साथमा उनका १९ वर्षीय छोरा र १२ वर्षीया छोरी छन् । उनीहरुलाई हुर्काउने र पढाउने जिम्मेवारी लक्ष्मीकै काँधमा छ ।
प्राथमिक तहको मात्र अध्ययन पूरा गरेकी लक्ष्मी पहिले बिहे गर्दा मात्र १५ वर्षकी थिइन् । काभ्रे घर भइ पोखरामा बस्ने महेश लामासँग उनले बिहे गरिन् । छोरा विवेकलाई जन्म दिइन् । तर पति महेशसँगको नातासम्बन्ध २ वर्ष पनि टिकेन । अन्तरजातीय बिहे गरी उनको जीवनमा बज्रपात भयो । श्रीमान्ले बिनाकारण छाडे । अलपत्र परेकी लक्ष्मी काठमाडौंमा एक होटलमा काम गर्न थालिन् ।
उनको सम्झनामा त्यस्तै २०६६ सालतिरको कुरा हो । त्यसबेला उनको चिनजान नुवाकोट त्रिशूलीका राजु लामासँग भयो । राजुसँग बिहे हुँदा छोरा विवेक ११ वर्षका भैसकेका थिए । पछि उनले छोरी मुस्कानको जन्म दिइन् । छोरीको जन्मको १८ महिनापछि फेरि उनी एक्लै भइन् । दोस्रो बिहे गरेका राजुले पनि उनलाई छाडेर अलपत्र पारे । काठमाडौंमै दुःखजेलो गरी दुई छोराछोरी हुर्काउँदै गइन् । केही वर्षपछि उनी काम खोज्दै माइतीघर पोखरा आइन् । तर माइतीमा पनि उनी हेलत्व भइन् । छुट्टै डेराकोठामा बस्न थालिन् । डेराकोठा बसेर काम खोज्न थालिन् । राम्रो र चित्तबुझ्दो काम हात परेन । तर फेवातालले काम दियो । किनकि सहजै पाइने काम थियो–डुङ्गाचालक । लक्ष्मी फेवातालमा डुङ्गा चलाएरै हातमुख जार्ने करिब एक सय जना डुङ्गा चालकमध्ये एक हुन् । बाराहीघाटका महिला डुङ्गाचालकमा सक्रिय ४ मध्ये पुरानोमा पर्छिन् ।
हालै रित्तो डुङ्गामा अडिएर दुःख पोख्दै लक्ष्मीले भनिन्, ‘बाँच्नै मुस्किल हुन थालिसक्यो । कोठाभाडा ६ महिनादेखि तिर्न सकिएको छैन । छोराछोरी बिच्चलीमा छन् । राहत मागेर कति दिन पुग्छ र ?’
उनले डुङ्गा चलाउन थालेको १० वर्ष बितिसकेछ । कहिल्यै नरोकिएको डुङ्गामा मान्छे तार्ने काम अहिले भने एक्कासी रोकिन गएको हो । अप्रत्याशित रुपमा आएको कोभिड–१९ को प्रभावले पर्यटकीय सहर पोखरामा लक्ष्मीजस्तै डुङ्गाचालकको दैनन्दिन क्रियाकलापमा ठूलो असर पारेको छ ।
उनले भनिन्, ‘घरबेटीले देख्छन् कि भनी सुटुक्क डेरा छिरेर निस्कनुपर्छ । काम अचेल पाइएको छैन । वडा कार्यालय र डुङ्गा व्यवसायी समितिले दिएको राहतले लकडाउनमा भरथेग भो । अब चाँडै डुङ्गा चलाउन पाए हुन्थ्यो ।’
लक्ष्मीको दुःखलाई नजिकबाट देखेकी सहकर्मी हुन्, रुपा विश्वकर्मा । रुपा अहिले फेवा डुङ्गा व्यवसायी समिति सहकोषाध्यक्ष पनि छन् । उनले पनि सुरुवातका दिनमा डुङ्गा चलाइन् । विगतको दिन सम्झिदै रुपाले भनिन्, ‘पुरुषको तुलनामा महिला डुङ्गाचालकको व्यथा फरक छ । यात्रुले हामीलाई नपत्याएर हत्तपत्त डुङ्गा चढ्न मान्दैनन् । यात्रु पाउनै मुस्किल थियो, पहिले । दिनभरि काम गर्दा हात फतक्कै गल्ने । ज्याला असाध्यै कम ।’
अहिले कोरोनाले भने आफूहरुको पेसा नै धरापमा परेको भन्दै उनले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने रुपाको माग छ । उनका अनुसार फेवाताल किनारका ८ घाटमा महिला डुङ्गाचालकको संख्या अहिले मात्र १०/१५ जति छ ।
कोरोना भाइरसको कारण प्रभाव नपर्दाका बेलासम्म डुङ्गा चलाएर एक चालकले ५ देखि १ हजारसम्म कमाइ गर्थे । कहिलेकाहीँ धेरै ट्रिप (पालो) पर्‍यो भने ३ हजारसम्म पनि कमाइ हुँदो रहेछ । लक्ष्मीले पनि त्यस्तै हाराहारीमा कमाइ गर्थिन् । अहिले डुङ्गा नचल्दा कमाइ शून्य छ । लक्ष्मी र रुपाजस्तै डुङ्गाचालकले लकडाउनको बेलामा ज्याला मजदुरी गरे । बर्खामास तालमा जलकुम्भी झार देखिँदा केही दिन सो झार फाल्ने काम भयो । दिनगन्तीमा ज्याला बुझे । तर ताललाई कुरुप पार्ने जलकुम्भी फाले पनि लक्ष्मीको जीवनको झार फाल्न कठिन छ । उनी आफै भविष्यदेखि डराउँछिन् । के होला र कसो होला भन्ने अन्योल कायमै छ । सरकारले कोरोनाको संकटबीच विपन्न तथा यसखालको वर्गलाई विशेष प्याकेज दिन ढिला गर्नु हुँदैन । लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा, सिलबाहेकका विकल्प खोजिनुपर्छ ।
फेवाताल किनारका विभिन्न ८ वटा घाटमा ८ सय वटा संचालित हुन्छन् । सबैभन्दा बढी बाराहीघाटमा ३ सय ३४ डुङ्गा छन् । बाराहीघाटसहित गौरीघाट, अम्बोट, फिस्टेल, पहारी, फेवा, स्वीमिङ पुल र बंगलादी गरी ८ घाटबाटै डुङ्गा चल्छन् । सबै डुङ्गाको लागि आलोपालो प्रणाली समितिले लागू गर्दछ । लामो समय डुङ्गा नचल्दा केही डुंगा बिग्रिएका छन् । काठ मक्किएको छ । फुर्सदिलो समयमा अचेल मर्मत सम्भार गरेको दृश्य पनि देख्न पाइन्छ ।
यसैबीच फेवा डुङ्गा व्यवसायी समिति उपाध्यक्ष मंगलबहादुर नेपालीले कोरोना प्रभावले डुङ्गाचालकलाई निकै समस्या भएको बताउँछन् । डुङ्गा व्यवसायीको तुलनामा मजदुरको समस्या बेग्लैखालको रहेकोले समितिसहित पोखरा ६ वडा कार्यालयमार्फत राहत प्रदान गरी सहयोग गरेको उनले बताए । तर राहतले मात्रै कतिञ्जेल चल्छ र ? डुङ्गाचालकको सहजताका लागि सरकारले २/३ प्रतिशत व्याजदरमा निश्चित समयावधिको लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
डुङ्गा व्यवसाय प्रत्यक्ष पर्यटनसँग जोडिने भएकोले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।